वास्तवमा के हो यो घटना? भिडियोहरु किन धेरै भाइरल हुँदैछ ? – Classic Khabar
September 1, 2021 85
परिवारका सदस्यले पैसा माग्दा नदिएपछि एक महिलालाई गरेको एउटा ब्यवहार अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । यो उत्तर प्रदेशको बुलन्दशहरको अहमदगढ पुलिस स्टेशन क्षेत्रबाट सार्वजनिक भएको भिडियो हो ।
जसमा एक महिलालाई खा’ट’मा बाँ’ धे ‘र रा’ खि’एको छ । उनलाई अन्य केहीले भिडियो बनाउँदै प्रश्न गरेको देखिन्छ । प्रहरीका अनुसार यो घटना परिवार र छिमेकीसंग सम्बन्धित छ। महिला मानसिक रूपमा कमजोर देखिएकी छन् ।
वास्तवमा यो घटनाको तीन भिडियोहरु धेरै भाइरल हुँदैछन्। एउटा भिडियोमा ती महिलालाई खाटमा बाँ ‘धि ‘ए’को छ र केहि मानिसहरु उनीसंग कुरा गरीरहेछन् र सायद उनको समस्या जान्न खोज्दैछन्। दोस्रो भिडियोमा ती महिला ढोका तिर दौडिरहेकी छिन् र एक बूढो पुरुष उसलाई स मा त्न खोज्दैछन्।
सबै तीन भिडियो बुलन्दशहर जिल्ला को अहमदगढ पुलिस स्टेशन क्षेत्रको एक गाउँको हो। महिला उनी संग यस्तो व्यवहार को लागी दुखी छन् र उनी कसैको सहयोग लिएर प्रहरी कार्यालय पुगेकी छन् ।
प्रहरीले भिडियो जाँच गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । प्रहरीले ति महिलाको छोरीर्लाइ पनि बोलाएर कुराकानी गरेको छ । महिला भन्छिन् कि केहि मानिसहरु उनीसंग पैसा मागिरहेका थिए उनले पैसा नदिएका कारण त्यस्तो गरिएको हो ।
एसएसपी सन्तोष कुमार सिंहका अनुसार ती महिलाकी जेठी छोरीलाई सोधपुछ गरीएको छ, जसबाट पुष्टि भएको छ कि आमा एक वि क्षि प्त अवस्थामा बाँचिरहेकी छिन् ।
यो पनि, मनाङका कर्मचारी कार्यालय फर्कन सकेनन्
Prev२०७८ साल भदौ १६ गते बुधबार, दिनमा तपाईलाई कस्तो ? आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल जानकारी लिनुहोस ग्रहगोचर, शुभ अशुभ, मायाप्रेम सहितको दैनिक राशिफल
Nextसंजय लीला भन्सालीको ‘हिरामन्डी’मा मनिषा कोइराला पनि, के छ उनको भूमिका ?